Thenga i-Shea Butter Mask Ukuthambisa nokunciphisa izimbotshana Ukulala kobuso buso - Ukuhanjiswa Kwamahhala & Akukho Intela | WoopShop®
I-Shea Butter Mask Ukuthambisa & Izimbobo Ezinciphayo Ukulala kobuso obuso ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Thayipha: Imaski egezekayo
Sebenzisa: Ubuso bonke
Isici: Mhlophe, amafutha, ukulawula uwoyela, ukugcwaliswa kokujula
Uhlobo lwento: Ukwelashwa neMask
I-NET WT: 5g / pc
Izwe / Isifunda Sokwakha: China
Inombolo yesibonelo: 87321
Inombolo Yesitifiketi: 2017000001
Igama lomkhiqizo: Imaski yobuso
Izici: Okunomsoco, Ukuhambisa amanzi, Ukuthambisa, Ukulawula uwoyela, ukuKhanya
Ubuningi: 8pcs / ibhokisi
Lesi buso sesitshalo singasusa ngempumelelo ukungcola okusele namafutha amaningi kuma-pores.
Ingahlanza ukwakheka ebusweni.
Yenza isikhumba sicace futhi sihlanzeke, ngenkathi unikeza isikhumba amanzi amaningi ukuthi ondle.
Thuthukisa ibhalansi yesikhumba namanzi namafutha esikhunjeni sobuso, futhi wenze ukuhlangana kwepore, isikhumba sihlanganiswe futhi sikhanyiswe.
Isiza ukuthuthukisa ukoma kwesikhumba.
Ukukhipha ubulembu bese uhlanza ubuso bakho ngesihlanzi kuqala. Bese uthatha inani elifanele lalo mkhiqizo ngokulinganayo lisetshenziswe ebusweni bakho (ngaphandle kwamehlo nodebe). Hlala cishe imizuzu engama-20 kuya kwengama-30, lapho ukungcola namafutha ebusweni kukhishwa, sebenzisa isikhwehlela esithambile esimanzi noma isiponji ukukhuhla imaski yodaka.
Phakamisa izikhathi ezingu-2-3 ngesonto. Ungaguqula futhi imvamisa yokusetshenziswa ngokuya ngezidingo zakho zobuso.
Sicela uzame ukusebenzisa lo mkhiqizo esikhumbeni sendlebe emuva. Uma kukhona ukusabela okungajwayelekile noma ukungaphatheki kahle, sicela uyeke ukusebenzisa.
Sicela ubeke lo mkhiqizo ngaphansi kwendawo eyomile nepholile, futhi ugweme ukushisa okuphezulu nelanga eliqondile.
Ibhokisi eli-1 imaski yobuso